ခရမ်းသီး Lasagna: ယနေ့အိမ်မှာပြုလုပ်ရန်အရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်း ၇ မျိုး
ဗီတာမင် D3 ကြွယ်ဝသောအစားအစာများ - သင်၏အစားအစာထဲသို့မည်သည့်အစားအစာများစားသင့်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ
အစာ	 11 ဇန်နဝါရီလ 2019
ခရမ်းသီးကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းအသစ်များပြုလုပ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်အမြဲစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစာ၌သင်ခရမ်းသီး lasagna ချက်ပြုတ်နည်းများကိုအသင့်တော်ဆုံးမှအစပ်များနှင့်အဆီပြန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ဖြည့်သည်။
အောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင်သင်သည်ဤချက်ပြုတ်နည်းအားလုံးကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တစ် ဦး စီကိုစစ်ဆေးပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုအိမ်တွင်ရွေးချယ်ပါ။
ခရမ်းသီး lasagna အံကိုက်
၎င်းသည်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်သောဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးနေ့စဉ်တူညီသောဟင်းလျာများကိုမစားဘဲမျှတသော၊ ကွဲပြားသော၊ မျှတသောအစားအစာကိုပိုင်ဆိုင်လိုသူအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောချက်ပြုတ်နည်းဖြစ်သည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ပြင်ဆင်ပုံကိုကြည့်ပါ။
ခရမ်းသီး ၃ လုံး
mozzarella ၃၀၀ ဂရမ်
ကြက်ရင်အုံ ၁ လုံး
အဘိတ် mode ကို
ဖြတ်ပြီးသောအခါခရမ်းသီးအချပ်ပထမအလွှာကိုမုန့်ဖုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ mozzarella၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ ကြက်ကြော်တို့ကိုထည့်ပြီးပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးမကုန်မချင်းစစ်ပါ။ အဆုံးသည်ခရမ်းသီးအလွှာနှင့်အပေါ်မှငံပြာရည်ဖြစ်သင့်သည်။
ထို့နောက်သင်မီးဖိုကို preheat ရန်နှင့် lasagna ကိုအနိမ့်အလတ်စားအပူတွင်တစ်နာရီခန့်ဖုတ်ရမည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ပါက parmesan ချိစ်ဖြင့်ဖြန်း။ ၎င်းကိုစားနိုင်သည်။
[junkie-alert style = "green"] ဤကဲ့သို့သောပိုအရသာရှိသောချက်ပြုတ်နည်းများကိုလေ့လာပြီးဝိတ်ကျနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက် 101 LOW CARB RECIPES ကိုကြည့်ပြီးအစာမစားဘဲသင်အမြဲမက်ခဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်။ [/junkie သတိပေးချက်]
vegan ဒိန်ခဲ ၃၀၀ ဂရမ်
ဆော့စ်တွေကိုအရင်လုပ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုခရမ်းချဉ်သီးသုံးလုံး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီနှင့်ဆီအနည်းငယ်တို့ဖြင့်ကြော်ပါ။ အဖြူရောင်ငံပြာရည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်သီဟိုnut်စေ့၏နို့ကိုပြောင်းဖူးမှုန့်ဖြင့်ရိုက်သည်။ ၎င်းအားလုံးကိုမီးထဲသို့ ယူ၍ အသားထူသည်အထိမွှေပါ။ သင်အလွန်အရသာရှိသော nutmeg ကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။
အထုပ်များအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ စုစည်းရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ vegan cheese နှင့် white sauce တို့ထည့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်တို့နှင့် တွဲ၍ နယ်ပေးပါ။ ပြီးလျှင်သီဟိုnuts်စေ့စေ့ကိုဖြန်းနိုင်သည်။
ပထမခေါင်းစဉ်တွင်သင်တွေ့ခဲ့သော fit recipe သည်ကြက်ကြော်နှင့် ပေါင်း၍ ၎င်းသည်အရသာရှိသည်။ သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အရာသည်ချိစ်ထည့်ရန် (သို့) ကြက်သားအတွက်အလွန်အရသာရှိသောဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အစွန်အဖျားမှာခြစ်ထားသောကြက်သားကိုရွှေဝါရောင်နှင့်ဟင်းခတ်ပေးပါ။ ၎င်းသည်အလွန်အရသာရှိသည်။ အရသာရှိမယ့်ကြက်သွန်ဖြူငံပြာရည်အနည်းငယ်ကိုလည်းသုံးပါ။ ကြက်သားကအငန်အရမ်းမလွန်ဖို့သတိထားပါ။
မင်းရဲ့ခရမ်းချဉ်သီး lasagna ကိုအမဲသားနဲ့လုပ်စားမယ်ဆိုရင်၊ အစွန်အဖျားကကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့နံ့သာမျိုးကိုကြော်ပြီးမင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက်အလွှာများသည်ခရမ်းသီး၊ ဒိန်ခဲ၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့် bolognese ငံပြာရည်တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ငံပြာရည်အလွှာတို့နှင့်ပြီးပြီးအရသာရှိသော Parmesan ချိစ်ကိုဖြန်းပေးပါ။
အဖြူရောင်အချဉ်ရည်သည်ဤချက်ပြုတ်နည်းများအနက်မည်သည့်အရာနှင့်မဆိုလိုက်ဖက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အဖြူရောင်ငံပြာရည်ကိုပြင်ဆင်ရန်နွားနို့၊ ပြောင်းဖူးမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းအဖြူ၊ ဆားနှင့် nutmeg အနည်းငယ် အပူကိုနိမ့်သည်အထိမွှေပြီးဒါပဲ၊ မင်းခရမ်းသီး lasagna ပေါ်မှာဖြန့်လို့ရတယ်။
Zucchini နှင့်ခရမ်းသီး lasagna
Zucchini သည် lasagna ၏ pasta အဖြစ်သုံးနိုင်သောအခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခရမ်းသီးဖြင့်ရောနှောထားသော“ မုန့်စိမ်း” ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခရမ်းသီးအလွှာနှင့် zucchini အလွှာ။ အဲဒါလည်းအရသာရှိတယ်။
သင့်တော်တဲ့စာရွက်ထဲမှာသုံးမယ့်ဒိန်ခဲကိုမင်းကြိုက်ရင် ricotta အစားစားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အရသာရှိပြီးပန်းကန်၏အသွင်အပြင်ကိုလုံးဝမပြောင်းလဲပါ။
ဒါတွေအားလုံးကမင်းလုပ်မယ့်စာရွက်ပေါ်မူတည်တယ်။ ၎င်းသည်ကယ်လိုရီ ၁၆၀ မှ ၂၉၀ အထိရှိသည်၊ အသင့်တော်ဆုံးနှင့် vegan တစ်မျိုးသည်ပိုပေါ့ပါးသည်၊ ငံပြာရည်နှစ်ခု၊ အသားနှင့်နံ့သာမျိုးသည်ပိုလေးလာသည်။
သင်ခရမ်းသီး lasagna ချက်ပြုတ်နည်းများကိုကြိုက်လျှင်ဤစာသားကိုသင်၏လူမှုကွန်ယက်များတွင်ဝေမျှပါ။
Waxy ပြောင်းဖူး - အဲဒါဘာလဲ။ ဘာအတွက်လဲ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ? ထိုထက်မက!
ရှလကာရည်ပါးလာသလား။ အမှန်တရားလားဒဏ္myာရီလား ဒီမှာအရာအားလုံးကိုလေ့လာပါ။